Fedora 34 dia efa navotsotra, fantaro izay vaovao | Avy amin'ny Linux
Efa navotsotra ny Fedora 34, fantaro izay vaovao
Rehefa afaka volana maro ny fampandrosoana sy ireo fanovana isan-karazany izay nambara nandritra ny taon-dasa ary maro amin'izy ireo no izarantsika eto amin'ny bilaogy, Ny kinova azo antoka an'ny Fedora 34 dia efa navotsotra ary vonona ny alaina.
Ity kinova vaovao an'ny Fedora 34 ity misy fanatsarana marobe maromaro izay mendrika hodinihina, satria maro ny fanovana mifandraika amin'ny fanatsarana ny zava-bita ary indrindra amin'ny orientatera.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Fedora 34
2 Sintomy ny Fedora 34
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Fedora 34
Amin'ity kinova vaovao ity dia afaka mahita inona isikaary nafindra tao amin'ny mpizara haino aman-jery PipeWire ny renirano audio rehetra, izay izao no toerana misy anao fa tsy PulseAudio sy JACK ary izany dia ankoatry ny maha-ambony ny PipeWire amin'ny lafiny maro, ny fampiasana ny Wayland koa dia raisina an-tanana, ankoatr'izay ny fifangaroana miaraka amin'ny birao KDE dia afindra amin'ny Ampiasao ny Wayland avy amin'ny By default, ny session X11 dia avoaka amin'ny safidy iray.
Ary izany koa miresaka wayland, Fedora dia lasa benchmark ary Fedora 34 dia manasongadina ny fanohanan'ny Wayland nohatsaraina, satria ny fahaizana mampiasa ny singa XWayland dia nampiana tamin'ny rafitra miaraka amina mpamily NVIDIA tompony.
Amin'ny tontolo iainana any Wayland, Ampiharina ny fanohanana asa maody tsy misy loha, ahafahanao mihazakazaka singa desktop amin'ny rafitra mpizara lavitra miaraka amin'ny fidirana amin'ny VNC na RDP.
Ny singa Xwayland DDX dia nafindra tao anaty fonosana misaraka noforonina tamin'ny kaody vaovao izay tsy miankina amin'ny kinova miorina amin'ny Server X.Org.
Fiovana lehibe iray hafa ihany koa ny fanavaozana ny Fedora 34 GNOME kinova 40 sy ny tranomboky GTK 4. Ao amin'ny GNOME 40, ny birao birao virtoaly ao amin'ny Overview momba ny Fandinihana dia voalamina amin'ny firindrana amin'ny tontolon'ny tany ary miseho ho toy ny boribory mitohy miankavia sy miankavanana.
Ny birao tsirairay aseho amin'ny maody topimaso dia mampiseho mazava tsara ireo varavarankely misy, izay mihetsiketsika sy mihombo amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny mpampiasa, ary koa manome tetezamita tsy misy fangarony eo amin'ny lisitry ny programa sy ny birao birao virtoaly.
Etsy ankilany, amin'ny ankapobenyl editions rehetra an'ny Fedora dia nafindra hampiasa ny rafitra systemd-oomd ho an'ny valiny mialoha ny fitadidiana ny rafitra ambany fa tsy ny fizotran'ny earlyoom.
Afaka mahita izany koa isika ny rafi-drakitra Btrfs, izay efa banga amin'ny kinova desktop Fedora (Fedora Workstation, Fedora KDE, sns.) Hatramin'ny kinova farany, dia misy famatrarana angona mangarahara amin'ny alàlan'ny algorithm ZSTD. Ny Compression dia toerana misy anao amin'ny fametrahana vaovao an'ny Fedora 34.
Ao amin'ny fanontana IoT, tohana ny takelaka ARM Pine64, RockPro64 ary Jetson Xavier NX, ary fanatsarana ny fanohanan'ny tabilao an'ny i.MX8 SoC toy ny Thor96 96boards ary Solid Run HummingBoard-M. Nanome ny fampiasana ny mekanisma fiambenana fitaovana ho an'ny fanarenana rafitra mandeha ho azy.
Ny motera fonosan'ny FreeType dia nafindra hampiasa ny maotera maodely HarfBuzz glyph. Ny fampiasana HarfBuzz amin'ny FreeType dia nanatsara ny kalitaon'ny tolo-kevitra.
Nesorina ny fahafaha manafoana ny SELinux amin'ny fotoana maharitra; Tsy ekena intsony ny fandavana ny fanovana fanovana. Aorian'ny fanombohana SELinux, mpamily LSM dia vakiana fotsiny, manatsara ny fiarovana amin'ny fanafihana mikendry ny hanafoanana ny SELinux aorian'ny fitrandrahana ny fahalemena izay mety hanova ny atin'ny fitadidiana kernel.
Ankoatra izany, natomboka indray ny serivisy rafitra rehetrad nohavaozina indray mandeha rehefa avy nahavita ny fifanakalozana tao amin'ny mpitantana fonosana RPM. Raha teo aloha dia natomboka indray ny serivisy aorian'ny fanavaozana ny fonosana tsirairay avy izay niampita azy, niforona ny filaharana iray ary averina amin'ny laoniny ny serivisy amin'ny faran'ny fivoriana RPM, taorian'ny fanavaozana ny fonosana sy ny tranomboky rehetra.
Sintomy ny Fedora 34
Mila mankany fotsiny ianao tranokala ofisialy ny fizarana sy ao amin'ny fizarana fampidinana azy afaka mahazo ny sarin'ny rafitra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Efa navotsotra ny Fedora 34, fantaro izay vaovao
Navoaka sahady ny GCC 11.1, ireo no vaovao sy fanovana lehibe indrindra